လုပ်ငန်းသုံး မျက်နှာပြင် ရေခဲသေတ္တာ၊ အအေးခန်း၊ Condensing Unit - Runte
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် အအေးပေးစက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါသည်။ အဓိက ထုတ်ကုန်များမှာ ရေခဲသေတ္တာနှင့် ရေခဲသေတ္တာ၊ အအေးခန်းများ၊ condensing ယူနစ်များနှင့် ရေခဲပြုလုပ်သည့်စက် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် အရောင်းပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 20 ဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း 60 ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ , Beijing Haidilao Hotpot Logistics အအေးခန်း ၊ Hema Fresh စူပါမားကတ် ၊ Seven-Eleven အဆင်ပြေသော စတိုးများ၊ Wal-Mart စူပါမားကတ် စသည်တို့ သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ စျေးကွက်တို့တွင် နာမည်ကောင်း ရရှိထားပါသည်။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား4ခုထက်ပိုသည်။
ဝန်ထမ်း ၃၀၀ ကျော်
Video Open Chiller Parameter ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဤ open chiller အမျိုးအစား2မျိုးရှိသည်။ 1. low base open chiller5layers with 2. normal open chiller with4layers shelves. သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးအစား မော်ဒယ် ပြင်ပအတိုင်းအတာ(မီလီမီတာ) အပူချိန် အပိုင်းအခြား(℃) ထိရောက်မှု ပမာဏ(L) မျက်နှာပြင် ဧရိယာ(m³) GLKJ အဖွင့်အအေးခန်း (၄လွှာ စင်များ) GLKJ-125F 1250*910*2050 2~8 960 1.42 GLKJ-187*9 107* 2050 2~8 1445 2.13 GLKJ-250F 2500*910*2050 2~8 1925 2.84 GLKJ-375F 375...
ဗီဒီယို အဖွင့်အအေးခန်း ပါရာမီတာ အမျိုးအစား မော်ဒယ် ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အပူချိန် အကွာအဝေး (℃) ထိရောက်သော အသံအတိုးအကျယ်(L) ပြသမှု ဧရိယာ(㎡) GLKJ မှန်တံခါး ရိုးဖြောင့်ရေအေးပေးစက် GLKJ-1309FM(2 တံခါး) 1250*905*2050 2~8 960 1.62 GLKJ- 1909FM(3 Door) 1875*905*2050 2~8 1445 2.4 GLKJ-2509FM(4 Door) 2500*905*2050 2~8 1925 3.24 GLKJ-3809FM 50(2500*905*2050) 2~8 1925 3.24 GLKJ-3809FM 59 (20*8) အားသာချက်များသည် ဒီဇိုင်းပိုင်းနှင့် ကြော့ရှင်းသောပုံစံကို ဦးဆောင်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖရိန်နှင့် ဖရိမ်မဟုတ်သော မှန်များ...
Plug-in အမျိုးအစား Compresso...
ဗီဒီယိုဖွင့် အအေးခန်း ပါရာမီတာ အမျိုးအစား မော်ဒယ် အမျိုးအစား ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အပူချိန် အကွာအဝေး (℃) ထိရောက်မှု ပမာဏ(L) XYKW Glass Door ရိုးဖြောင့် Chiller ပလပ်အင် XYKW-1207YC 1220*650*1920 1~10 510 XYKW-1807YC 502*18 1~10 760 XYKW-2407YC 2425*650*1920 1~10 990 အဝေးထိန်း XYKW-1207FC 1220*650*1920 1~10 550 XYKW-1807FC 18419*60250*18419*65 ~10 1080 ကျွန်ုပ်တို့၏ အားသာချက်များ လေအေးပေး၍ အအေးခံသော အအေးများကို လျင်မြန်စွာ EBM အမှတ်တံဆိပ် ပရိတ်သတ်များ- နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် ...
ဗီဒီယို Deli Food Showcase ကောင်တာ ကန့်သတ်ချက်များ 1. ရွေးချယ်နိုင်သော အနံ- 1135mm သို့မဟုတ် 960. 2. ရွေးချယ်နိုင်သော ကွန်ပရက်ဆာတည်နေရာ- ကွန်ပရက်ဆာအတွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပကွန်ပရက်ဆာ။ 3. ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်ကို အောက်ခြေတွင် ထည့်နိုင်သည်။ အမျိုးအစား မော်ဒယ် ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အပူချိန် အကွာအဝေး (℃) ထိရောက်မှု ပမာဏ(L) မျက်နှာပြင် ဧရိယာ(㎡) GGKJ Plug-in Deli Food Showcase ကောင်တာ GGKJ-1311YS 1250*1135*1190 -1~5 173 1.01 GGKJ-19151Y* *1190 -1~5 259 1.43 GGKJ-2511YS 2500*1135*1190 -1~5 346 1.86 GGKJ-38...
Video Deli Food Showcase Counter Parameter 1. အပြည့်အ၀ အလုံပိတ်ကောင်တာ အရောင်းပြခန်းသည် သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ 2. ရှေ့အကွေးမှန်သည် ဘယ်ညာ လျှောနှင့် ပုံသေမှန်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ 3. Plug-in နှင့် remote ကို ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ 4. လျှောမှန်တံခါးကောင်တာထောင့်စွန်းကောင်တာတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါသည်။ အမျိုးအစား မော်ဒယ် ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အပူချိန် အကွာအဝေး (℃) ထိရောက်မှု ပမာဏ(L) ပြသမှု ဧရိယာ(㎡) DGKJ Deli အစားအစာ အရောင်းပြခန်း ကောင်တာ DGBZ-1311YSM 1250*1075*1215 -1~5 210 0...
Plug-in အမျိုးအစား Double Si...
ဗီဒီယို ပေါင်းစပ်ထားသော ကျွန်းရေခဲသေတ္တာ ကန့်သတ်ချက် သတ်မှတ်ချက် 1. ကျွန်းရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ ကွန်ပရက်ဆာ၊ ပလပ်ပေါက် အမျိုးအစား၊ ပေါင်းစပ်မှု ပိုမိုကြာရှည်နိုင်သည်။ 2. ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်ကတ်ပေါ်အခြေခံ၍ အရောင်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ 3. ထုတ်ကုန်များကို အစိတ်အပိုင်းများခွဲရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် တင်းတောင်းများ။ 4. အအေးမခံသော စင်သည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အမျိုးအစား မော်ဒယ် ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အပူချိန် အကွာအဝေး (℃) အကျိုးသက်ရောက်မှု ပမာဏ(L) မျက်နှာပြင် ဧရိယာ(㎡) ZDZH ပလပ်အင် အမျိုးအစား နှစ်ထပ်ခြမ်း အဖွင့်ကျွန်း ရေခဲသေတ္တာ ZDZH-0712YA 730*1200*895 -18~-22 190 0.63 ZD...
ဗီဒီယိုကျွန်းရေခဲသေတ္တာ ကန့်သတ်ချက်များ 1. အဝေးထိန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကွန်ပရက်ဆာသည် အပြင်ဘက်တွင် ကြေးပိုက်ပိုက်ဖြင့် ကျွန်းရေခဲသေတ္တာနှင့် ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ 2. အပေါ်ဘက်မှန်တံခါးကို ရွေးချယ်နိုင်သည် ။ 3. အကျယ်သည် 1550mm၊ နောက်တစ်မျိုးမှာ 1810mm ဖြစ်သည်။ အမျိုးအစား မော်ဒယ် ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အပူချိန် အကွာအဝေး (℃) ထိရောက်သော အသံအတိုးအကျယ် (L) မျက်နှာပြင် ဧရိယာ(㎡) SDCQ အဝေးထိန်းအမျိုးအစား ကျဉ်းမြောင်းသော နှစ်ထပ်လေထွက်ပေါက် ကျွန်းရေခဲသေတ္တာ SDCQ-1916F 1875*1550*900 -18~-22 820 2.2 SDCQ-2516F 2500 *1550*900 -18~-22 1050 2.92 SDCQ-3...
တစ်ပိုင်းမြင့် Arc ပုံသဏ္ဍာန် M...
Video Open Chiller Parameter များကို နည်းလမ်း2ခုဖြင့် ထားရှိနိုင်သည် 1. နံရံနှင့် နောက်ကျောဘက်သို့ ဘေးဘောင်များဖြင့် တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ပါ။ 2. အဆုံးတစ်ခုစီတွင် အဖုံးတစ်ခုစီထည့်ပါ၊ semi-high open chiller အစုတစ်ခုဖွဲ့ပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးအစား မော်ဒယ် ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အပူချိန် အကွာအဝေး (℃) ထိရောက်သော အသံအတိုးအကျယ် (L) မျက်နှာပြင် ဧရိယာ(㎡) GLKJ အအေးပေးစက် GLKJ-1309FH 1250*905*1500 2~8 440 1.48 GLKJ-1909FH 81875*902* 2.21 GLKJ-2509FH 2500*905*1500 2~8 880...
အသားပင်လယ်စာ ရေခဲမုန့် သိုလှောင်ခန်း Paramete...
လတ်ဆတ်သောငါးနှင့်အသား fa ...
ဗီဒီယို အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သိုလှောင်မှု Para...
ဗီဒီယို Single Bitzer Compressor Condensi...